Shir wadatashi oo Garowe lagu qabanayo, caqabad ku timi [Dhageyso]
GAROWE 3 MAY, 2015 (GO)- Kulan loogu magac darey shirka wadatashiga Puntland ayaa waxaa bisha May 15, 2015 lagu qaban doonaa magaalada Garowe kaasoo lagu casumi doono dhinacyada kala duwan ee bulshada, sidaas waxaa saxaafadda u sheegey maanta Siciid Farax Yare oo ah afhayeenka guddiga loo xilsaarey qaban qaabada kulankaas.
HALKAN KA DHAGEYSO SICIID FARAX YARE
Shirkaan oo Dowlada Puntland horey uga codsatey qabsoomidiisa beesha caalamka ayaa waxaa kharashka ku baxaya bixinaya hay'ada Interpeace iyo kuwo kale, halka ay qabashadiisa sahleyso PDRC.
Guddi ka kooban sadex Wasiir iyo sadex xildhibaan, hay'adaha maalgalaniya qabsoomida shirkaan iyo guddi madaxweynaha Puntland magacabey iney ka shaqeeyaan soo xulista ergooyinka ayaa maalmihii la soo dhaafey ku howlanaa qabsoomidda kulankaas.
Warsidaha Garowe online uma suurtoobin inuu helo qodobada rasmiga ah ee lagaga hadlayo kulanka balse warar ku dhow ayaa sheegaya in lagaga hadli doono arrimaha dimoqraadiyadda, halka ay Puntland mareyso 16 sano kadib iyo in bulshada Puntland dowlada xilka haysa wax ka waydiiso qorshayaasheeda siyaasdeed dhaqaale, amni iyo kuwa kale ee muhiimka u ah jiritaanka Puntland.
Dhinaca kale, wararka warsidaha Garowe Online helayo ayaa sheegaya in kulanka caqabadi ku timid qabsoomiddiisa kadib markii qoraal kasoo baxey xafiiska madaxweyne ku-xigeenka uu maanta soo gaarey guddiyada shirka qaban qaabiniya taasoo fajaciso ku noqotey.
Qoraalkan oo uu ku saxiixan yahay madaxweyne ku-xigeenku, ayaa waxaa ku qornaa " in markii uu la tashadey guddiga qaban qaabada kadib uu go'aan ku gaarey in shirkaas loo wareejiyo magaalada Galkacayo" taasoo kadis ku noqtey inta badan guddiyadii ku howlanaa hirgalinta kulanka.
Garowe online ayaa fahansan in qoraalkaasi xafiiska madaxweyne ku-xigeenka kasoo baxey 25 April, 2015 xili madaxweynaha Puntland ku maqnaa wadanka Ethiopia, waxayna wararku intaas ku darayaan in labo xubnood oo ka tirsan guddiga qaban qaabada ku lug laahyeen wax ka badalista halka lagu qabanayo kulanka.
Qoraalkan ayaa sidoo kale la yaab ku noqdey wasiirrada iyo xildhibaannada guddiyada kala shaqeynayey qabsoomidda shirka.
Lama oga go'aanka hay'adaha maalgalinaya shirkaan ka qaadan doonaan qoraalka kasoo baxey xafiiska madaxweyne ku-xigeenka Puntland, go'aankaas oo yeelan doona saameyn siyaasadeed iyo mid dhinaca amaanka ah.